झगडा पनि फाइदाजनक – Nayadhar
आइतबार, आषाढ २२, २०७६ | ९:४९:३८ |
काठमाडौँ । घरमा बालबालिका आपसमा झगडा गर्दा तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ? पक्कै पनि बालबालिकालाई गाली गर्ने, छुट्याउने गर्नुहुन्छ होला तर बालबालिकाको सानो झगडा उनीहरूकै लागि फाइदाजनक हुने चिकित्सक बताउँछन् । बाल्यकालमा बच्चाहरू झगडा गर्छन् भने त्यसलाई धेरै हदसम्म छुट दिएकै राम्रो हुने पाटन विज्ञान प्रतिष्ठानका मानसिक रोग विभागका प्रमुख डा. रवि शाक्यले बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकाको सानोतिनो झगडाले रचनात्मक हुन मद्दत गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
बालशिक्षाका विशेषज्ञ कुमुद भट्ट भन्नुहुन्छ, “बालबालिकाको झगडाले हामीलाई पनि सिक्ने मौका मिल्छ, झगडा गर्नु आफैँमा नराम्रो हो तर बालबालिकाको सानोतिनो झगडाले उनीहरूलाई नै सिर्जनशील बनाइरहेको हुन्छ । ”सामान्य कुरामा भनाभन हुनु, कुटाकुट गर्नु, रुनु कराउनु यी सबै सामान्य हुन् ।
यस्तो लडाइँ झगडाले उनीहरूमा आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्ने मौका मिल्ने भट्ट बताउनुहुन्छ । साथै, आफ्नो कमजोरी पनि औँल्याउने मौका पाउँछ । जब साथीले मेरो कामप्रति चित्त बुझाउँदैन, तब उसले गाली गर्न थाल्छ । यसको मतलब के हो भने, मैले गरेको काम अरूलाई मन परेको छैन, मैले गरेको काम सबैका लागि राम्रो हुन सकेको छैन ।
बालविशेषज्ञ रमेश मल्ल भन्नुहुन्छ, “बच्चाहरू झगडा गर्दा रुन्छन्, तब उनीहरूलाई फकाउनु पर्दैन । केही समयपछि आफैँ सम्हालिन्छन् । यसको अर्थ उनीहरूले आफ्नो मनलाई आफँै सम्झाउने तथा भावनात्मक रूपमा बलियो बनाउने क्षमता वृद्धि हुन्छ । ” झगडापछि एकैछिनमा एकअर्कासँग बोल्छन्, घुलमिल हुन्छन्, खेल्न थाल्छन्, रमाउन थाल्छन् ।
खेल्दाखेल्दै उनीहरूबीच मतान्तर हुन्छ । फेरि तनाव सुरु हुन्छ । एकले अर्कालाई आरोप लगाउन थाल्छन् । एकले अर्कालाई गाली गर्न थाल्छन् । उनीहरूमा यस्तो काम बारम्बार भइनै रहन्छ, त्यसमा अभिभावकले दिक्क भने मान्नु नहुने उहाँको सुझाव छ ।
डा. शाक्यले बाल्यकालमा चुपचाप बस्ने, झगडा नगर्नेमा बालमस्तिष्कमा कुनै समस्या भएको भन्न सकिन्छ । त्यसैले झगडा गर्न दिनुपर्छ ।
अहिले बालबालिकालाई मोबाइल, ट्याब हेर्दै फुर्सद छैन, कहाँबाट झगडा गर्नु, के खेल्नु ?“यो समस्याको विषय भएको छ,” उहाँको भनाइ छ । बालशिक्षा विशेषज्ञ भट्ट थप्नुहुन्छ, “साना बालबच्चाहरू दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा आफूआफू लडाइँ झगडा गर्छन्, हामीलाई थाहा छैन, यो बालसुलभ प्रवृत्ति हो । बालापनको सौन्दर्य पनि हो । ”